Ntụle Semalt: 15 Best Data Scraping Software
A ga-etinye usoro site na ngwaọrụ di iche iche nchapu na ihe ntinye data. Ngwaọrụ ndị a na-ejikọta na saịtị, chọpụta na nakọta ozi bara uru, ma kpochapụ ya dabere na ihe ị chọrọ. Ọzọkwa, ha na-echekwa data ndị a kpochapụrụ na data ha ma ọ bụ nata ya na kọmputa gị - digital temperature scanner. N'ebe a, anyị ekwuola banyere ngwá ọrụ weebụ 15 kachasị mma na Intanet.
1. Mkpụrụ Mara Mma
Ọ bụ ụlọ akwụkwọ Python a ma ama maka ọkpụkpụ faịlụ XML na HTML. Naanị ịkwesịrị ịwụnye ma rụọ ọrụ ngwá ọrụ weebụ a ma kwe ka ọ rụọ ọtụtụ ọrụ. I nwere ike iji ya mee ihe na usoro Debian na Ubuntu.
Nke a bụ otu n'ime ngwá ọrụ kachasị mma s. Ọ na-enye anyị ohere iwepu ozi sitere na isi ma ọganihu na saịtị ma nwee nkeji oge a, njirimara enyi-enyi.
Mozenda bụ ihe nyocha ihuenyo na ngwanrọ nchịkọta data. Ọ na-enye ọdịnaya na ụdị dịgasị iche iche ma bụrụ ihe nchịkọta isi na-pịa.
Ọ bụ ihe ntanetị weebụ nke nwere ike iji na-anakọta ozi sitere na intaneti. Ị nwere ike ịmepụta API site na saịtị dị iche iche site na iji usoro a.
Octoparse bụ onye ntanetị weebụ na ndị na-eme ihe ntanetị nke data maka ndị ọrụ Windows. Ọ nwere ike ịgbanwu ozi nhazi ma ọ bụ nke a na-adịghị edozi n'ime ọdụm ahaziri edozi n'enweghị mkpa koodu.
Ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma ihe ntanetị weebụ s, ihe ntinye data, na crawlers.
Ọ bụ ihe ngwọta kasịnụ nye nsogbu ndị metụtara data. Ikwesịrị ibudata usoro a, zipu arịrịọ ma weghachị data dịka ọchịchọ gị. )
8. Crawl nkịtị
A maara na ọ ga-enye ihe ndekọ na-emepe emepe nke ibe weebụ ndị a gbagọrọ agbagọ. Ọ na-eme ka data ntanetị ghọọ ụdị nke a haziri ahazi na nke a haziri ahazi, ihe ntanetịpụta maka ndị ọrụ, ma nyekwa ozi site na iche iche
Ọ bụ ọrụ nchịkọta data na-akpaghị aka na ọtụtụ ntanetị na njirimara.Ọ nwere ike wepụ ma gbanwee data data gị n'ime ụdị a haziri ahazi, na-enye nsonaazụ na JSON na Usoro nke CSV
10. Afọ Ọhụụ
Ọ dị mma maka ndị chọrọ iwepu data sitere na ihe oyiyi na vidiyo dị iche iche. f ụlọ ọrụ ma na-ahapụ gị ka ịmepụta ụlọ ọrụ ntanetị weebụ.
Ọ bụ naanị onye nchịkọta data nke na-ahazi data gị ma wepu ibe weebụ gị n'ime sekọnd ole na ole. Ọ bara uru maka ndị mmepe na onye mmemme ma nwee ike gbanwee saịtị gị n'ime API.
12. Dexi. Ee
Ọ na-abata na ntọala abụọ na-ezighị ezi ma na-enye aka inweta ihe ọmụma sitere na ọtụtụ ibe weebụ, PDF akwụkwọ, XML na HMTL faịlụ. Ngwa ngwa desktọọpụ a dị maka ndị ọrụ Windows.
14. Wepụ Web Wepụ
Ọ bụ ihe ntanetị weebụ na ihe ntinye data nke kwesịrị ekwesị maka ụdị elu na mmalite. O nwere ihe dị iche iche pụrụ iche ma wepụ data site na faịlụ dị iche iche HTTP.
Ọ na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ dị iche iche ya na onye na-edekọ aha ya ma ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị na-ekpuchi data nyocha. Ọ na-ewepụta ozi bara uru site na adreesị email na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'Ịntanet.